१८ बर्षिय नेपाली बाहुबलीले दुनियालाई चकित बनाए ! बाईक, ट्याक्सी जुरुक्कै बनाउछन (भिडियो)
सँसारमा अचम्म अचम्मका मानिसहरु भेटिन्छन् । सञ्चार तथा प्रविधिको माध्यमले अचम्मको कला व्यक्ति भएकाहरुको कला अहिले लुकेर बस्न पाउँदैन । विशेष गरी विदेशमा अनेक स्टेण्ड गरेका भिडियोहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्थ्यौ ।
तर नेपालमा पनि पछिल्लो समय थुप्रै कला भएका व्यक्तिहरुको भिडियो युटुब लगायतका सामाजिक सन्जालहरुमा भाईरल हुने गरेका छन् । यस्तैमा नयाँ नयाँ न्युज नेपालका शिशिर भण्डारीले अर्को अचम्मका व्यक्तिको भिडियो ल्याए ।
बाईक, कार लगायतका सबै गाडीहरुलाई जुरुक्कै उचाल्ने रबिन हैजुको कला अचम्मको छ । उनी काँधमा जुरुक्कै बाईक बोक्छन् । कार र ट्याक्सी दुई हातले उचाल्छन् । उनको यो कला देख्दा सबै चकित पर्छन् ।
अर्को रोचक कुरा त के भने रबिन मात्र १८ बर्षका भए । आखिर कसरी यो सम्भव भयो त ? के यो सबै निरन्तर अभ्यासले सम्भव भएको होकी खास रहस्य के छ ? हेर्नुहोस यो भिडियोमा सम्पुर्ण कुराहरु… अनलाईन टिभी नेपालबाट
बाईक, कार लगायतका सबै गाडीहरुलाई जुरुक्कै उचाल्ने रबिन हैजुको कला अचम्मको छ । उनी काँधमा जुरुक्कै बाईक बोक्छन् । कार र ट्याक्सी दुई हातले उचाल्छन् । उनको यो कला देख्दा सबै चकित पर्छन् । अर्को रोचक कुरा त के भने रबिन मात्र १८ बर्षका भए । अनलाईन टिभी नेपालबाट ।